Safiirka cusub ee Somaliya oo waraaqaha aqoonsiga ka gudoomay Madaxweynaha Mareykanka – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha Mareykanka, Barack Hussein Obama, ayaa waraaqaha aqoonsiga ee safiirnimo waxa uu ka guddoomay Danjiraha Somaliya u fadhin doono Magaalada Washington Ee Xarunta Wadanka Mareykanka.
Madaxweynaha Mareykanka, ayaa Danjire Axmed Ciise Cawad waxa uu Khamiistii ku qaabilay Aqalka Cad (White House), iyadoona uu kaga guddoomay waraaqahiisa safiirnimo.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa sanadkan magacaabay Danjiraha, ka dib markii Danjirihii hore Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke, uu noqday Ra’iisal Wasaaraha Somaliya, dhammaadka sanadkii hore.
Danjire Axmed Ciise Cawad, ayaa waxay Madaxweynaha Mareykanka ka wada hadleen arrimaha labada dal, isagoona gaarsiiyay dhambaal uu kaga waday dhigiisa Somaliya.
Safiir Cawad oo la hadlay laanta afka Somaliga ee VOA, ayaa sheegay Madaxweynaha Mareykanka in uu daneynayo arrimaha dalka Somaliya, gaar ahaan inay soo hagaagto nabadgelyo Somaliya, sida uu yiri.
Barack Obama, ayaa Khamiistii waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay 17 xubnood oo safiiro ah, kuwaa oo dalalkooda u fadhin doona Xarunta Mareykanka Ee Magaalada Washington.